Manjaro Linux 2019 Ntuziaka nwụnye | Site na Linux
Manjaro Linux 2019 Ntuziaka nwụnye
Manjaro Linux bụ ugbu a nkesa Linux kachasị ewu ewu dịka ọkwa Distrowatch si dị Na agbanyeghi na ọ bụ ihe sitere na Arch Linux, nkesa a na-eme ka ọ dịrị onye ọrụ mfe ịwụnye Arch Linux, ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile na-atụnye mgbakwunye Arch Linux dị ọcha.
N'oge a ka anyị hụ otu esi etinye Manajaro Linux n'ụzọ dị mfe Okwesiri ighota na ihe omuma a bu ndi ohuru ndi choro igbali Arch Linux.
1 Nweta Manjaro Linux
2 Etu esi etinye Manjaro Linux
Nweta Manjaro Linux
Nzọụkwụ mbụ anyị ga - eme bụ ibudata Manjaro ISO, ebe a ị kwesịrị ịma na enwere ọtụtụ nsụgharị dịnụ, ha niile nwere gburugburu desktọọpụ dị iche iche, gụnyere KDE, XFCE na GNOME na mgbakwunye na nsụgharị obodo.
Nwere ike ibudata Manjaro Linux na ya ukara website njikọ ahụ bụ nke a.
Mgbe ị kpebiri ụdị nke ịchọrọ iji, pịa njikọ njikọ ntanetị.
Windows: Anyị nwere ike ịmịpụrụ Imgburn, UltraISO, Nero ma ọ bụ mmemme ọ bụla ọbụlagodi na-enweghị ha na Windows 7 ma emesịa ọ na-enye anyị nhọrọ iji pịa nri akanye na ISO.
Linux: Ha nwere ike iji ọkachasị nke na-abịa na gburugburu eserese, n'etiti ha bụ, Brasero, k3b, na Xfburn.
Windows: Ha nwere ike iji Etcher, Universal USB Installer ma ọ bụ LinuxLive USB Creator, ha abụọ dị mfe iji.
Linux: Nhọrọ a tụrụ aro bụ iji iwu dd, nke anyị ji kọwaa ụzọ nke anyị nwere onyinyo Manjaro yana kwa ebe ugwu anyị nwere eriri anyị:
Nhọrọ ọzọ bụ Etcher ebe ọ bụ obe-ikpo okwu.
Etu esi etinye Manjaro Linux
Iji malite ntinye Manjaro, Anyị ga-edobe usoro anyị nke anyị kwadebere na kọmputa anyị ebe anyị ga-eme nwụnye wee gaa n'ihu buut sistemụ ahụ.
Tupu ịmalite nhazi ahụ ịkwesịrị ijikọ na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị na-eji njikọ Ethernet, ị ga-enwerịrị njikọ, ma ọ bụrụ na ị na-eji WIFI, pịa akara ntanetị na ntanetị aka nri nke ihuenyo ma họrọ "họrọ netwọk".
Pịa na netwọk ịchọrọ ijikọ wee tinye paswọọdụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Iji malite usoro nwụnye n'ezie, Pịa na akara ngosi "Launch Installer" na ihuenyo nnabata.
Nwere ike ịhụ ndepụta na akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ma ndị a bụ ọkwa ị ga-agafe iji wụnye Manjaro. Nzọụkwụ mbụ bụ ịhọrọ asụsụ maka onye nrụnye.
Nzọụkwụ nke abụọ na - eduga gị ịhọrọ ọnọdụ gị. Nke a ga - akọwapụta oge mpaghara kọmpụta gị ma setịpụ elekere na oge kwesịrị ekwesị
Ha nwekwara ike ịhọrọ asụsụ maka sistemụ ha yana mpaghara maka nọmba na ụbọchị.
N’ọtụtụ ọnọdụ, a ga-ahazi ọnọdụ gị na asụsụ gị ka ọ bụrụ ụkpụrụ ziri eziEeh, mana ọ bụrụ na igbanweghi ha, pịa na “Osote”.
A ga-agwa gị ka ịhọrọ akara ngosi keyboard gị.
Ndabere, asụsụ nke keyboard gị ga-abụ ndabara na Manjaro installer ekpebiela na ọ bụ eziokwu. Ha nwere ike ịnwale nhazi ahụ site na ịde ihe n'ime igbe enyere.
Ọ bụrụ na nhazi ahụ ezighi ezi, họrọ asụsụ dị na ngalaba aka ekpe wee họrọzie ntọala ahụ na ngalaba aka nri.
Na nzọụkwụ ọzọ na nkebi ihuenyo na-ekwe ka ị họrọ ebe ị chọrọ iji wụnye Manjaro.
Nhọrọ gụnyere "wụnye ọnụ", "dochie nkebi", "ihichapụ disk" ma ọ bụ "akwụkwọ ntuziaka nkebi".
Ọ bụrụ na ha chọrọ okpukpu abụọ na Windows, ha nwere ike ịhọrọ ịwụnye yana wee họrọ nkebi ha chọrọ ịda iji wụnye Manjaro.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Manjaro dochie nkebi na diski gị, họta nhọrọ "Dochie nkebi" wee họrọ nkebi ịchọrọ ịgbanwe.
Iji mee Manjaro naanị sistemụ arụmọrụ gị, pịa "Ichicha disk" nhọrọ wee pịa "Ọzọ".
Ugbu a ịkwesịrị ịmepụta onye ọrụ ndabara. Na nzọụkwụ ọzọ ha ga-achọ itinye aha ha, aha njirimara na aha maka kọmputa ha.
Emechaa Ga-ekenye paswọọdụ ịchọrọ iji maka onye ọrụ ahụ na paswọọdụ nkwenye.
Na mgbakwunye na paswọọdụ onye ọrụ ndabara, ha nwere ike tinye paswọọdụ dị iche maka onye nchịkwa ma kwado ya.
Otú ọ dị, Ọ bụrụ na ịchọrọ ka paswọọdụ onye nchịkwa ahụ bụrụ otu paswọọdụ onye ọrụ, pịa na "jiri otu paswọọdụ maka akaụntụ nchịkwa" nhọrọ.
Site na ịpị "Wụnye", a na-enye gị ohere ikpeazụ ịlaghachi. Ọ bụrụ na ijide n'aka na ị chọrọ ịga n'ihu, pịa "Wụnye Ugbu a".
Ná ngwụsị nwụnye, wepu mgbasa ozi echichi ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Manjaro Linux 2019 Ntuziaka nwụnye
ihe nkiri nkiri dijo
Wụnye manjaro 19.1 n'akụkụ mint 19.3, tinyere uefi ndị 2 ma ha na-arụ ọrụ nke ọma. Manjaro nwere nhọrọ karịa mint na nke ahụ kwesịrị ịchekwa dị ka ndị maara. O furu m obere nwa iji rụọ ọrụ bluetooth mana ọ bụ x ngafe si one to another nothing ma, ọ bụ ezigbo distro dị ka ha na-ekwu na ruo ugbu a enweghị nsogbu m na-eji mint na akwụkwọ ndetu a na nri ụtọ na Asus netbook nke m nwere ma ugbu a aka ugbua Ọ dị arọ maka ụgbụ ahụ n'ihi na ọ bụ igwe dị afọ 10. Ihe 2 distros ahụ m kwuru tupu m jiri ha na lenovo 50-80 ha na-arụ ọrụ nke ọma na ọgbọ 3th i5 na 16gb nke ebule. Ana m akọwapụta tinye ssd 240 gb ebe m wụnye distros, wepụ onye na-agụ ya na n'ọnọdụ ya m na-etinye 1 tera hdd nke wetara akwụkwọ ndetu na nke ikpeazụ m na-eji dị ka ụlọ nke distros ma hapụ ohere na ssd iji wụnye emepe kwa, ekele
Nvidia na-ewebata GeForce RTX 2060 na Nkwado FreeSync